तपाईं मसँग असहमत पनि हुनुहुनेछ कि– म बोल्न सक्छु ! तर म आज बोल्नेछु । तपाईंलाई म सत्य सुनाउने छु । एउटा लामो यात्रापछिको थकाइ म निस्सासिएर मेट्दैछु । म जीवनभर मान्छेको दास भएर बाँचें । आज यो बन्द बाकसभित्र भए पनि मेरो स्वतन्त्रता फुकेको छ ।
मसँगै मान्छेहरूले सर्वाधिक मन पराएको पुस्तक महाभारत बाकसमा लखतरान परेको छ । मैले सुनेअनुसार महाभारतमा भिष्म भन्ने एक पात्रको कथा छ । जो जिन्दगीभर आफ्ना प्रतिज्ञाको बन्दी भएर जीवनको उतरार्द्ध​मा मजस्तै निस्सासिएको मृत्यु पाउँछ । सबै कुरा गलत देख्दादेख्दै पनि गलतका पक्षमा उभिन बाध्य हुन्छ । मेरो जीवनलाई पनि त्यस्तै बाध्यताहरूले कुल्चेर यो निस्सासिदो परिवेशमा ल्याइपुर्‍याएका हुन् ।
मलाई अझैं पनि स्पष्ट याद छ त्यो क्षण ! जब मलाई बोकेर हिडेको त्यो युवकले बेश्याको कोठरीमा रात बिताएको थियो । र मेरै सहाराले उसले जीवनको परमसुख पाउन सकेको थियो । त्यस युवकले मलाई त्यो बेश्याकहाँ छोडेर गएको रातपछि त्यसैगरी त्यहाँ थरिथरि अनुहारका कैयन् युवा तथा वृद्धहरू रात बिताएर गए । त्यो बेश्या आफ्नो प्रत्येक अँध्यारो रात ती परपुरुषलाई सुम्पिन्थी । र हरेक बिहान ती पुरुषहरूसँग आफ्नो रातको मूल्य बटुल्थी ।
उनीहरू गएपछि मलाई छातीमा टाँसेर भक्कानो छुटाएर रुन्थी । सम्झेर ल्याउँदा उसको छातीको न्यानो रापले मेरो हृदयलाई अहिले पनि पगाल्न थाल्छ । म त्यो समय बेश्यासँगै आफूलाई पनि निक्कै कमजोर र निरिह भएको पाउँथें । उसका आँसु पुछिदिन मन लाग्थ्यो ।
म कैयन् ठाउँ घुमेको छु । धेरे मान्छेहरूसँग यात्रा गरेको छु । महलमा साँघुरिएको उज्यालोदेखि झुपडीमा झाङ्गिएको रातको मिठास मैले भोगेको छु । मालिकको घरमा कामदार दुब्लाएको र पाल्तु कुकुर मोटाएको देखेको छु । मन्दिरको वरिपरी सयौं हात फिजाउने भिखारीहरूलाई धूलो चटाउँदै मन्दिरभित्रको मूर्तिसामु आफूलाई चढाइ मागेर लज्जित भएको अनुभूति संगालेको छु ।
मलाई धेरै समय मेरा मालिकहरूले जीवनजलभन्दा अत्तर र मदिरामा खर्चिएका छन् । हरेक हिउँद फाटेको लुगाले चिसो छल्दै छोराछोरीको भविष्यलाई न्यानो बनाउन कैयन् बाउआमाले मलाई खर्चेका छन्, पछि तिनै बाउआमालाई भविष्यमा आफ्नो महलभित्र भित्र छिर्न नदिन ढोकाको ताल्चा किन्नमा मलाई खर्चिने सन्तानको दास भएको अनुभव मैले भोगेको छु । दिनभरि साधुवादको पाठ पढाएर हरेक रात आफ्ना ब्रह्मचर्यले युवती चिथोर्ने धर्मगुरुहरूको नङ्ग्रा बनेको छु ।
चिकित्सक दिनरात उसकहाँ आइपुग्ने बिरामीहरूको चेक जाँच गर्थ्यो । उस्तै अनुहारका बिरामी मान्छे आफ्नो पीडाको पहाड त्यो चिकित्सकको टेबुलमा बिसाउँथें । म सहजै चाल पाउँथें । नोट राखिएको पन्तुर फुकाउँदा उनीहरूको अनुहारले साँझको छाक टार्ने चिन्ता बोल्थ्यो । उनीहरूमध्ये धेरै अपुग पैसाले गर्दा त्यो डाक्टरलाई उपचारमा सहुलियतका लागि हार गुहार गर्थे । तर मेरो चिकित्सक मालिकको त्यो क्षणिक समय ती गरिब बिरामीको महिनाभन्दा निकै महङ्गो हुन्थ्यो । चिकित्सक औषधि लेखिएको पर्चा उनीहरूको हातमा थमाएर थप उपचारका लागि फेरि आउन आग्रह गर्थ्यो ।
तर तीमध्ये धेरै बिरामीहरू फर्किएर आएनन् । हरेक बिहान म तिनै आउँछु भनेर गएका बिरामीहरूको पर्खाइमा बस्थे । तर उनीहरू फर्किन्नथें । साँझ तिनै नोटका सहारामा डाक्टर महङ्गा–महङ्गा कण्डम र कामसूत्रका आसनले भरिएका सिडी लिएर श्रीमतीलाई खुसी तुल्याउँथ्यो । म सोच्थें– म कति कमजोर छु । विवश छु । कैयन् संवेदना र भावना ममा ठोकिएर दिन रात यसरी नै आत्महत्या गर्छन् ।
मलाई त्यो समय त्यो डाक्टरको गोजीबाट उफ्रिन मन लाग्थ्यो । उसको सफा गोजी च्यातेर ती मैलिएका गोजीहरू पुग्न मन लाग्थ्यो । मलाई ती मयल परेका पन्तुर सुन्दर लाग्थे । हारगुहार गर्न मन लाग्थ्यो– ‘म यो कठोर दासताबाट मुक्त हुन चाहन्छु ।’
मेरो मालिक गाउँको साहु महाजन थियो । उसकहाँ आइपुग्ने प्रायः मानिस परैबाट झुकेर आइरहेको म देख्थें । एकदिन साँझको समयमा मेलौ कछाड लगाएर एउटा किसान आफ्नी गर्भवती श्रीमतीसहित मेरो मालिककोमा आइपुग्यो ।
केही समयपछि उसले घरमा अन्नपात सकिएकोमा हारगुहार गर्दै मेरो मालिकसँग ऋण माग्यो । उसको त्यो मलीन र टिठलाग्दो अनुहार देख्दा निकै दयालाग्दो थियो । तर मेरो मालिकको कठोर मनलाई त्यो किसानको हारगुहारले पगाल्न सकेन ।
मैले निकै समय पछाडि पसिनाका गन्ध सुँघ्न पाएँ । जुन मेरा पूर्वमालिकहरूको शरीरबाट आउने अत्तरको गन्धभन्दा निकै फरक थियो । उसले मलाई निकै नै धैर्यताका साथ सुमसुम्याएको थियो । र मलाई कति नदुख्ने गरी धैर्यताले पट्याएर गोजीमा राखेको थियो । साँझ घरमा लगेर मेरा च्यातिएर छुट्टिन थालेका शरीरका पत्रहरूलाई पहिलोचोटी निकै ध्यान दिएर जोडेको थियो । र आफ्नी आमालाई बुझाएको थियो ।
मैले त्यस दिन पहिलोपटक कोही प्रिय भेटिएको महसुस गरें । यसअघिका प्रायः मेरा मालिक हतार र हतासको यात्रामा हुन्थे । उनीहरूले मलाई प्रेमले कहिल्यै सुम्सुम्याउन भ्याएनन् । उनीहरूलाई मेरो छुट्टिन थालेको शरीरको बचाउ गर्ने फुर्सद कहिल्यै भएन । म त्यस दिन असाध्यै खुसी भएको थिएँ । त्यो बिर्जबहादुरको पहिलो कमाइ थियो शायद । उसकी आमाले मलाई निकै प्रेमले पट्याएर सन्दुकमा राखेकी थिइन् ।
मैले धेरै पछि मिठो स्पर्श पाएको थिएँ । त्यही रात ओछ्यानमा खोक्दै पल्टिरहेका आफ्ना पतिको निधार सुम्सुम्याउँदै ती बूढी गुनगुनाइन्, ‘भोलि नै हस्पिटलमा पुगेर तिम्रो लागि खोकीको औषधि किन्छु ।’
त्यो रात मेरो मालिक स्वास्नीले रतिरागमा सामेल हुने अनिच्छा देखाएपछि विरक्तिएर मदिरा किन्न भट्टी पसलतर्फ जाँदै थियो । बाटोमा हिडिरहँदा कसैले उसलाई पछाडिबाट हिर्कायो । मेरो प्रिय मालिक भुइँमा खस्न पुग्यो । मलाई त्यस युवकको अनुहार स्पष्ट याद आउँछ । जसले मेरो भूतपूर्व मालिकबाट लुटेर त्यस रात मलाई आफ्नो बनायो । त्यो रात म निक्कै तर्सिएको थिएँ । डरले मैले युवकको छातीमा टाँसिएर त्यो रात बिताएँ । र उसले एक निमेष पनि म माथिबाट आफ्नो हात हटाएन । रातभर मलाई सुमसुम्याइरह्यो ।
भोलिपल्ट त्यो युवक मलाई बोकेर हिड्यो । उही पुरानै बाटो जहाँ मेरो मालिक लुटिएको थियो । र मेरो मालिकको हातमा मलाई पुनः थमाएर आफ्नी छोरीलाई आफूसँगै लिएर गयो । मैले पछि बुझें मेरो भूतपूर्व मालिक लुटिनुको कारण । अघिल्लो रातदेखि त्रसित मेरो मनलाई मैले त्यस दिन निकै शान्त भएको पाएँ । मलाई पुनः त्यो युवकको छातीमा टाँसिन मन थियो ।
‘अब यात्रा सकिएको छ सायद । मलाई बोक्न कसैले कष्ट गर्ने छैन । मेरो जीवनको अर्थ कति भयो । अनि मेरो मूल्य केले निर्धारण गर्छ ? वस्तु या त्यसको उपयोगले । ती पुरुषहरूलाई रतिरागका लागि चाहिने कण्डम र त्यो बेश्याका लागि छाक टार्न चाहिने एक मुठ्ठी सागको मूल्य एकै थियो । तर मलाई धेरै कण्डम किन्नहरूले नै खर्चिए । मेरो उपयोग निकै सस्तोमा भयो । आफ्नो इनार भरिएर पोखिनै लाग्दा पनि मेरा भूतपूर्व मालिकहरू किन यति बिघ्न तिर्खाएका ? बिस्तरामा थन्किएको वृद्ध मानिसजस्तै म पनि थन्काइएको छु यो बन्द बाकसभित्र ।
यद्यपि म अझैं पनि बाहिर निस्कन चाहन्छु । म त्यो युवक, जसले मलाई धैर्यताका साथ सुमसुम्याएको थियो । उसको छातीमा पुनः टाँसिन चाहन्छु । उसका अधुरा सपना पूरा गर्न खर्चिन चाहन्छु आफूलाई । पुनः त्यो बेश्याको छातीमा टाँसिएर पग्लिन चाहन्छु । उसका ती रात किन त्यति सस्ता भएका होलान् ? रामे दमाइलाई उसको निन्द्राबाट ब्यूँझाउन चाहन्छु । सोच्दैछु, मेरो प्रस्थानपछि ती बूढाले खोकीको औषधि खाँदै होलान् ?
मलाई फेरि पनि उस्तै गरी लुटिन मन छ । म बोल्न चाहन्छु ती मालिकहरूसँग । ती कठोर मालिकहरूसँग आफ्नो दासताको मूल्य मागेर आफूलाई खर्चिन चाहन्छु भोक, शोक र रोगहरूमा । मैले जीवनभर किन यति कठोर दासता भोगें ? मान्छेले जिन्दगीभर किन आफूलाई मेरो र मलाई आफ्नो दास बनाइरह्यो ? म मानिसलाई सुन्दर संसार देखाउने आँखालाई सुरक्षा दिने परेला थिएँ कि अन्धकारमा अल्झाउने कालोपट्टी ?’
साभार : नेपाली कला साहित्य डट कम